Yakavanzika Dhivhita - Mamirioni Vagadziri
Chinangwa chedu Chakavanzika Policy ndechekutsanangura zvakajeka mune zviri nyore uye nenzira yakapfupi, yakajeka uye inonzwisisika, maitiro atinoshandisa nayo yako pachako data. Yako data inogona kuwanikwa mukati megadziriro yekutumira kwevhisi, sarudzo yekusarudza, kugamuchira sevhisi yakapihwa newe kana isu tikabata dhata iyi paunoshanyira webhusaiti yedu. Yedu mutemo inovimbisa kuchengetedza kodzero dzako, kuvanzika uye kuchengetedzwa kweruzivo rwunotipa kwatiri, maererano nezvisungo zvepamutemo zvinesimba maererano nezvekudzivirirwa kwega data ruzivo uye kunyanya, mukutevera nechisungo chekuita pachena. Muchiitiko chakasiyana, tinogona kushandisa yako pachako data yekushandisa kana kudzivirira kwekodzero mumatare edzimhosva.
Isu Tinogona Kugovera Yako Yako Data ne
Makambani Edu Makambani.
Kutonga kweVoruzhinji uye Mitezo kana mutero, vashandi, kuchengetedzeka munharaunda kana chero chero mutemo unoshanda uchiida.
Vangabve vashandirwi, vekuunganidza vashandi, vechitatu vanobatana navo, basa rekucherekedza mabhodhi uye emukana mukana webasa kuti uwedzere mikana yako yekuwana iyo yakakodzera nyanzvi post.
Makambani anotarisira kugadziriswa kwedata, akadai sevashandisi vanotipa masevhisi ekunze uye nyanzvi dzemazano, magweta, vaongorori, maakaunti, mabhengi / masangano emari, nyanzvi dzemakomputa, vamiriri vezvekubuda kunze kwenyika, vatariri vezvekufambisa, vanodzidziswa uye vane mhosva pavanopara mhosva. teerera mutemo.
Kuwedzeredzwa data pasirese kunogona kuitawo zvekare kwezviito zvekare zvatichazoteedzera maApps, akaenzana eContractual Clause anogadziriswa neEuropean Commission uye EU-USA Chakavanzika Shield kuvimbisa izvo zvinotapirwa kunoendeswa kunyika dzisina sarudzo yakakwana kubva kuEuropean Commission. Chero zvazvingaitika, mapato matatu akagovaniswa naye mamwe data rehunhu anenge akambosimbisa kutorwa kwematanho uye ehurongwa matanho akakwana mukudzivirirwa kwayo kwakaringana.
Kuzivisa kunogadzirwa nesu pachivanzika kana neimwe nzira zvichienderana nemutemo. Isu tinotora matanho anonzwisisika mumamiriro ezvinhu kuti tive nechokwadi chekuti chero munhu wechitatu watinozivisa ruzivo rwemunhu ega anobatawo ruzivo rwako pachako zvichienderana neGDPR neMutemo Wakavanzika.
Kudzivirirwa kweDanho Rako
Isu tinotora matanho ehunyanzvi uye ehurongwa anodiwa kuchengetedza inodiwa kuchengetedzeka nekuvanzika maererano neako dhata yakagadziridzwa uye nenzira yakafanana, takaisa inodiwa sisitimu munzvimbo kuti tidzivise pane kugona kwedu kugona, kushandisa zvisirizvo, kusatenderwa kuwana, zvisiri pamutemo shanduko, kubviswa uye kurasikirwa kwedata
Iyi yekuchengetedza tsika inoshanda kune www.millionmers.com, iyo iri yake uye inoshanda neMM LLC. Iyi gwaro rekuvanzika inotsanangura maitiro atinotora uye nekushandisa ruzivo rwevanhu iwe rwaunopa pawebsite yedu. Iyo inotsanangurawo sarudzo dzaunowanikwa kwauri nezvekushandisa kwedu ruzivo rwevanhu, uye kuti ungawana sei nekugadzirisa ruzivo urwu.
1. Kuunganidza ruzivo uye kushandisa
Isu tinotora iyo inotevera ruzivo rwevanhu kubva kwauri.
Ruzivo rwekufambidzana, senge zita rako, email kero, tsamba yekutumira uye nhamba yefoni.
Ruzivo rwekubhadhara, kero yekugara uye kero yekubhadhara.
Ruzivo nezvebhizinesi rako, senge zita rekambani, kero, yebhizinesi mhando uye muridzi / vanobatsirwa.
Ruzivo rwakapindwa newe iwe saiti yaJob saiti, rakasarudzika, kushamwaridzana pasocial network, real estate, uye mamwe masevhisi zvinhu zvine chisarudzo chako wega uye isu hatizvitorere mhaka nazvo.
Tinogona kuunganidza ruzivo rwevanhu vevanhu vechitatu kana iwe ukawedzera mazita emutengi, mutengesi, webasa, vanogovera kana vanowana pamafomu edu ekuraira. Kuunganidza kweyechitatu-bato pachako inozivikanwa ruzivo inogona kuve yakakosha kuti uite uye kunyoresa yako reti kune zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi. Hatizoshandise ruzivo urwu kune chero imwe sarudzo yekutengesa. Aya mapato echitatu anogona kutibata nesu info@millionmaker.com kukumbira isu kuti tibvise ruzivo urwu kubva database yedu.
Isu tinoshandisa ruzivo rwatinounganidza ku:
Zadzisa odha yako.
Tinokutumira ziviso yekudaira.
Wongorora zvinodiwa nebhizinesi rako kuti uone zvakakodzera zvigadzirwa.
Tumira iwe chigadzirwa chakakumbirwa kana ruzivo.
Pindura kune zvikumbiro zvebasa revatengi.
Tumira iwe kutaurirana.
Mufambiro wakakodzera kushandira.
Pindura kune zvaunoshushikana uye mibvunzo.
2. Kugovera ruzivo
Ticha / tichagovana ruzivo nezvako nezvitatu chete munzira dzinotsanangurwa mune ino yekuchengetedza zvakavanzika. Hatimbotengese ruzivo rwemutengi wedu kune chero munhu wechitatu.
Tinogona kupa ruzivo rwako pachedu kumakambani anopa mabasa kuti atibatsire nemabhizimusi edu zviitiko (semuenzaniso; kugadzirisa yako odha / mubhadharo, mabasa ekushanya, vhiza yekushandisa, mvumo dzebasa, kubvunzana dzidzo, kutenga / kutengesa bhizinesi riripo, kunyoresa bhizinesi rako, kupa marezinesi, kuvhura account yebhangi, account exprescing kana kupa vatengi basa). Aya makambani anotenderwa kushandisa ruzivo rwako pachezvinongodiwa pakupa masevhisi aya.
Mamwe emapeji edu anoshandisa "ekuronga matekiniki" kushandira zvirimo kuenda uye kubva kune vanopa sevhisi (senge mubhadharo processor) tichichengetedza kutaridzika uye kunzwa kwenzvimbo ino. Ndokumbira kuti uzive kuti urikupa ruzivo rwako pachako kune vechitatu mapato uye kwete ku www.millionmers.com.
Tinogona zvakare kuburitsa ruzivo rwako pachako:
Sezvinodikanwa nemutemo, sekutevedzera subpoena, kana maitiro akafanana emutemo.
Kana isu tichitenda, nokutenda kwakanaka, kuziviswa uku kwakakosha kuchengetedza kodzero dzedu, kuchengetedza kuchengetedzwa kwako kana kuchengetedzeka kwevamwe, kuongorora hunyengeri kana kupindura kuchikumbiro chehurumende.
Kana isu takabatanidzwa mukubatanidzwa, kutora, kana kutengesa zvese kana chikamu chefuma yedu (mune iyo chiitiko iwe uchaziviswa kuburikidza neemail uye / kana chiziviso chakakurumbira pane webhusaiti yedu chekuchinja chero kupi zvako muuridzi kana kushandiswa kwemashoko ako , zvakare, chero sarudzo dzaungave uine maererano nerako ruzivo).
Kune chero mumwe munhu wechitatu, nekubvumirwa kwako kwekutanga.
Isu takazvipira kupa iyo yakanyanya mwero yekuchengetedza uye zvakavanzika. Zvese zviitiko zvepamhepo, zvinosanganisira kusevha chikwereti-kadhi kubhadhara, inoitwa zvakachengeteka uchishandisa tekinoroji, inotsigirwa nebrowser yako, iyo inochengetedza ruzivo rwese rwunotumirwa kwatiri. Isu tinotora kuchenjerera kwese kuchengetedza ruzivo rwemunhu kubva pakurasikirwa, kusunungurwa, kuwana zvisiri pamutemo, kushandisa zvisirizvo, shanduko kana kuparadzwa uye chengeta ruzivo rwega nekuda kwechinangwa iwe chaunotipa isu.
GDPR (General Data Dziviriro Mutemo) chirevo
Kuchengetedza ruzivo rwako rwakakosha, data rese rakachengetwa mudatabhesi yedu, ingave online kana pasiri pamhepo, ichachengetedzwa zvinoenderana neEU's GDPR (General Data Protection Regulation Link kumutemo weEuropean Union), unotanga kushanda zvizere muna Chivabvu 25, 2018.
MM LLC haiunganidze uye inocheka data kunze kwekunge yapihwa nokuzvidira newe. Isu tinovimbisa kunyatsoteedzera kuchengetedzwa kwenyika dzese uye kuchengetedzwa kwemaitiro.
Isu tinongokutumira iwe ruzivo rwakakodzera kwazvo muImigration Services, Dzidzo Services, Corporate Services, Mutero uye Kuongorora, Mikana Yebhizinesi, inotorwa neruoko neboka redu rakazvitsaurira revashandi, avo vanhu vanokoshesa kuvanzika kweruzivo rwevanhu.
4. Kutsvaga tekinoroji / makuki
Cookie idiki mameseji faira inochengetwa pakombuta yemushandisi yezvinangwa zvekuchengeta zvinyorwa. Isu tinoshandisa makuki pane yedu saiti. Isu hatibatanidze ruzivo rwatinochengeta mumakuki kune chero ruzivo rwunozivikanwa iwe rwaunotumira uri pane ino saiti.
Isu tinoshandisa ese echikamu ID makuki uye makuki anoramba aripo kuteedzera maitiro emushandisi uye kuchengetedza ruzivo iwe rwaunoisa mumafomu edu. Chikamu cheID ID kuki chinopera kana iwe ukavhara browser rako. Kuki inoramba ichiripo pane yako hard drive kwenguva yakareba. Unogona kubvisa makuki anoramba aripo nekutevera madhairekisheni akapihwa mudhairekitori rako re "rubatsiro" rewebhu. Ukaramba macookie, unogona kushandisa saiti ino, asi kugona kwako kushandisa dzimwe nzvimbo dzesaiti yedu kunogumira.
Kuverengera kunongedza / kutarisana zvakare
Isu tinobatana neyechitatu-bato ad network kune kana kuratidza kushambadzira pane yedu saiti kana kutonga kushambadzira kwedu kune mamwe masayiti. Wedu ad-network mudiwa anoshandisa makuki nemawebhu beacons kuunganidza zvisingazivikanwe pachako ruzivo nezve zviitiko zvako pane webhusaiti yedu uye mamwe mawebhusaiti, kukupa kushambadzira kwekutarisirwa kunobva pane zvaunofarira.
Isu tinoshandisa tekinoroji yesoftware inonzi yakajeka gifs (aka web beacons) kutibatsira kugadzirisa zvirinani pane yedu webhusaiti nekutizivisa izvo zvirimo zvinobudirira. Bvisa zvipo zvidiki zvine giraidhi yakasarudzika, yakafanana mukuita kuki uye inoshandiswa kuteedzera mafambiro epamhepo evashandisi vewebhu. Kupesana nekuki, idzo dzinochengeterwa mushandisi yedhiraidhi dhiraivhi, yakajeka gifs yakadzamidzirwa zvisingaonekwe pamapeji ewebhu uye ingangoita saizi yekumira kuzere pakupera kwemutsara uyu. Isu hatisunge iyo ruzivo rwunounganidzwa neakajeka zvipo kune edu vatengi eedu anozivikanwa ruzivo.
Analytics / log mafaira
Isu tinounganidza imwe ruzivo otomatiki uye tinoichengetedza mumafaira ehuni. Ruzivo urwu runosanganisira yako internet protocol (IP) kero, browser mhando, internet webasa mupi (ISP), achireva / kubuda mapeji, anoshanda system, date / nguva chitambi, uye nekudzvanya data.
Isu tinoshandisa iyi ruzivo, iyo isingaratidzi munhu mumwe neumwe mushandisi, kuongorora maitiro, kutonga nzvimbo, kuteedzera mushandisi mafambiro ekutenderera nzvimbo yedu nekuunganidza ruzivo rwevanhu nezve yedu mushandisi seyese. Isu hatibatanidze iyi data inounganidza pachako kune ruzivo runowanikwa pachena.
Iko kushandiswa kwetekinoroji yekutevera nevatapi vedu vekushandisa, vatambi vehunyanzvi, kana zvimwewo zvinhu zvechitatu pane yedu saiti (seiya sevaya vanobatanidzwa mukunzwisisa kubudirira kwekushambadzira) haina kufukidzwa neiri mutemo rekuchengetedza. Aya mapato echitatu anogona kushandisa makuki, akajeka gifs, mifananidzo uye zvinyorwa kuvabatsira zviri nani kutungamira nezvavo pane ino saiti. Isu hatina yekuwana kana kutonga pamusoro pemuchina uyu. Isu hatisunge ruzivo rwakaunganidzwa nevechitatu mapato kune vatengi veduwe kana mushandisi
Kuchengetedza ruzivo rwako pachako kwakakosha kwazvo kwatiri. Kana iwe ukaisa ruzivo rwakakomba (senge kiredhiti-kadhi, bhangi-account kana ruzivo rwebhizinesi) pamafomu edu ekuraira, isu tinotumira kutumira kweiyo ruzivo tichishandisa yakachengeteka socket safu tekinoroji (SSL).
Isu tinotevera inowanzogamuchirwa zviyero kuti tidzivirire ruzivo rwega rwunotumirwa kwatiri, zvese panguva yekuzvitakura uye kana tangozvigamuchira. Nekudaro, hapana nzira yekutumira pamusoro peInternet kana nzira yekuchengetedza yemagetsi, iri 100% yakachengeteka. Naizvozvo, hatigone kuvimbisa kuti ndeye chengetedzo yakakwana. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve chengetedzo pane yedu saiti, iwe unogona kutibata nesu panguva info@millionmaker.com.
6. Rimwe Ruzivo
Zvinongedzo kumasaiti echitatu-bato
Saiti iyi inosanganisira zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti ayo zvakavanzika maitiro zvinogona kusiyana neyedu. Paunotumira ruzivo pachako kune chero eaya saiti, ruzivo rwako runotongwa nemitemo yavo yekuchengetedza. Tinokukurudzira kuti uverenge nekuchenjera mutemo wekuchengetedza zvakavanzika chero webhusaiti yaunoshanyira.
Webhusaiti yedu inosanganisira zvemagariro-midhiya maficha (semuenzaniso, facebook, twitter, nezvimwewo sezvakataurwa pawebhusaiti yedu uye mawijeti akadai sebhatani re "Govera Izvi" kana zvinowirirana mini-zvirongwa. Aya maficha anogona kuunganidza yako IP kero uye peji ripi rauri kushanyira pane ino saiti, uye inogona kuseta cookie kugonesa iyo ficha kuti ishande nemazvo. Zvemagariro-midhiya maficha uye majeti anogona kunge akagamuchirwa neyechitatu bato kana kuitirwa yakananga pawebhusaiti yedu. Kufambidzana kwako nezvinhu izvi zvinotongwa nehurongwa hwekuvanzika kwekambani inovapa.
Isu tinogona kuratidza humbowo hwevanhu vevatengi vakagutsikana, kuwedzera kune zvimwe zvinotsigirwa, pane yedu saiti. Izvi zvipupuriro zvinodhonzwa kubva kune wechitatu-mubatsiri webasa, izvo zvinogona kukumbira yako ruzivo, kusanganisira zita rako uye email kero. Kunyangwe isu tisingatumire iyo chaiyo inozivikanwa ruzivo kune ino saiti, kana iwe uchida kugadzirisa kana kudzima uchapupu hwako, tapota taura nemutongi wedata.
Shanduko kuchirongwa ichi
Tinogona kuvandudza iyi mutemo wekuvanzika kuratidza shanduko kune yedu ruzivo ruzivo. Kana tikachinja chero zvinhu, tinokuzivisa nenzira yechi ziviso pane ino saiti ino isati yashanduka kuita basa. Tinokukurudzira kuti udzokorora kudzokorora kuverenga peji rino ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pezvekuvanzika maitiro.
Note * Sechirongwa, isu hatigovani kana kutengesa data revatengi vedu nechero rechitatu, kudzamara kunze kwekunge masevhisi akasarudzirwa achiitwa kuburikidza nevatikabatana navo. Ruzivo rwako rwunochengetwa zvakavanzika zvakanyanya seyedu Seseti Yakavanzika.
Takatora makore ane ruzivo mukupedza kugona kwedu kwakasarudzika uye kushamwaridzana nedzimwe nyika nekudyidzana kuti tipe masevhisi akanaka kwazvo uye mhinduro kune vatengi vedu pamitengo yakawanda yemakwikwi.
Isu tinogadzira mikana yeVanhu uye Makambani kuwana zvirinani zvirongwa, zvakajairidzwa uye zvinogadziriswa zvigadzirwa.
Zviri pamusoro pako. Isu tinowedzera kuzivana newe, bhizinesi rako uye zvinangwa zvako musati mataura nezve zvingasarudzwa kana mikana.
Kubudikidza neruzivo rwedu hukuru uye dzakasiyana siyana dzakapihwa nekambani yedu, isu tinobatsira vanhu vamwe, mhuri, mabhizinesi pamwe nemakambani kuburikidza nehunyanzvi hwehunyanzvi kutamisa, kuraramisa, kuwedzera uye kukura, isu takanyatsoiswa munzvimbo yekutungamira munzira yekubudirira. Kunyangwe iwe uchifarira kutamira, kubatana uye kutora kana kutsvaga kurodha kumashure maitiro ako ehofisi, kutsvaga capital kana mubatsiri wezano kana kutsvaga yako inotevera chizvarwa chinotevera chirongwa, kubvunza zvemari nerutsigiro, kana kutsvaga mabasa epfuma kana mabasa anehukama kana dzidzo kunze kwenyika kana IT mhinduro tinogona kukubatsira iwe mune ese masevhisi atiri ikoko kuti titsigire
Semunhu wega kana muridzi kana mukuru wekambani yakazvimirira kana yehukama, munhu wese anopokana kwete nehurongwa hwekutarisira zviitiko zvezuva nezuva, asi, pamwe chete nekuve nechokwadi chenguva pfupi uye yekubudirira kwenguva yakareba ivo pachavo. Asi sezvo mitengo iri kuwedzera uye kutevedzera zvinodiwa kuchigadzira zvakanyanya matambudziko, iwe ungangosara uchinetseka kuti ucharamba sei uchirarama - tisingataure kubudirira - munguva ino nyowani, ndipo patinopinda.
Nhanho yedu nedanho Kusvikira - Kubva Kutanga Kubudirira
Nhanho 1: Ziva zvinodikanwa zveMunhu / Mhuri / Bhizinesi / Corporates.
Nhanho 6: Zano rezvemari uye remutero, kana zvichishanda.
Zvakakosha kusarudza shamwari yakakodzera nezvezvinangwa zvako uye zvido zvako, isu paMamirioni Mamaki takagadzirira kuona kuti munobudirira.
Vatengi vedu imhuri yedu uye isu tinogara takamira vatengi vedu nekunzwira tsitsi uye moyo murefu kuona kuti vanobudirira.
Mamirioni Macheki ndeimwe yekumisa mhinduro, tinopa mhinduro dzakagadzirirwa uye dzakagadzirirwa vanhu, mhuri, mabhizinesi pamwe nemakambani anokubatsira kwete chete mudzimba asiwo kunze kwenyika kune nyaya dzine chekuita nekubuda kunze, mushambadzi wekupinda kunze kwenyika, bhizinesi rekufambisa, mvumo yekushanda, mvumo yekugara , vagari vemo, dzidzo yenyika, kubvunzana bhizinesi, mhinduro dzebhizinesi, kuiswa kune dzimwe nyika, kugadziriswa kweHR, kutengesa nekutenga kwebhizinesi, CRM Solutions, yekubhadhara gedhi, kugadzirwa kwekambani munzvimbo 98, kuvhurwa kweakaundi bhengi, kunyoreswa kwevatengesi munyika dze119 nekushandisa kumwe chete. fomu, bhizinesi rezinesi, mahofisi emahara, huwandu hwehuwandu, kuwedzera kwenyika, basa rezvemitengo, bhizinesi yemutemo, chipangamazano wezvemari, kutaurirana kwezvekutengesa dzimba, kutenderera kutenderedza yakagadziriswa IT mhinduro senge Webhu kuvandudza, Eco mmerce mhinduro, Kusimudzira Software, kudhijitari kushambadzira, software mhinduro uye blockchain tekinoroji yekugadzira mazita mashoma pamakwikwi emakwikwi kwazvo ..
Isu tinopa masevhisi uye tsigiro mune zviri pasi apa zvinongedzo
Chengetedza kuvaka newe mupfungwa
Semubatanidzwa wepasi rese, isu tinopa vatengi vedu simba kukurumidza uye
zvakawanda zvinogadzikiswa nekukuchidzira iwe munzira yako yekukura.